उपासना घिमिरे - नारी
‘एयरोस्पेस आकाशदेखि जमिनसम्म उपयोगी’
महिला हो भनेर कुरा नसुन्ने होइन कि महिलाले पनि अवसर पाएमा गर्न सक्छन् भनेर हौसला दिनुपर्छ ।
उपासना घिमिरे, श्रावण ४, २०७८
‘सफलताका लागि काममा साधना आवश्यक’
सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो, जीवन । दुःखले पाठ सिकाउँछ । तर, दुःख छ भनेर पीडा लिनु हुँदैन ।
उपासना घिमिरे, असार २, २०७८
रोहिणीको नयाँ परिचय
साहित्यले मलाई लेख्न सहज बनायो । पुस्तकमा मैले राणाको थोरै भए पनि इतिहास र परिचय लेखेकी छु ।
उपासना घिमिरे, वैशाख २, २०७८
‘सरकारी सेवामा महिला बढी भए भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ’
चितवन फूलबारीमा जन्मिएकी सावित्री थापा गुरुङ पाँचजना दिदीबहिनी र एकजना भाइमध्येकी माहिली छोरी हुन् । शिवनगरस्थित नारायणी माविबाट उनले स्कुले शिक्षा, भरतपुरस्थित वीरेन्द्र क्याम्पसबाट इन्टर र स्नातकसम्मको अध्ययन गरिन् ।
उपासना घिमिरे, मंसिर ३, २०७७
मर्यादित महिनावारीमा अनुसन्धान गर्ने पहिलो अभियन्ता राधा पौडेल महिनावारी सम्बन्धी सबै विभेदलाई छाउपडीको संज्ञा दिन्छिन् ।
उपासना घिमिरे, जेष्ठ १५, २०७७
डा. अनिल नेपाल आएका बेला उनीहरू भेटघाट गर्थे । त्यतिबेला घुम्न कतै टाढा जाँदा कसैले देख्ने हो कि भन्ने चिन्ता डा. अनिललाई हुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरू नजिकैको रेस्टुराँमा पुग्थे । विवाह गर्ने समयमा मनीषाले शिक्षण अस्पतालको जागिर छोडिन् । अहिले मनीषा आफ्नी दुई वर्षीया छोरीको स्याहार गरेर दिन बिताउ“छिन् भने परिआएका बेला मोडर्न हर्ट क्लिनिकलाई समय दिन्छिन् ।
उपासना घिमिरे, असार ७, २०७५